Ama-emulators we-Nintendo 64 angcono kakhulu we-PC | Iforamu yeselula
UJuan Carlos Gutierrez | 20/06/2022 14:44 | Imidlalo
Iminyaka engu-26 kakade isihlukanise ne Ukuqala kweNintendo 64, ongene esikhundleni seSuper Nintendo eyimpumelelo kanye nekhonsoli yokuqala yohlobo lwaseJapan ku gxuma usuka ku-2D uye ku-3D eneziqu ezifana neZelda noma iSuper Mario 64.
Yakhiwe ngaphakathi isizukulwane sesihlanu aduduze, kanye ne-Sony PlayStation eyimpumelelo noma i-Sega's Saturn kanye igcine ifomethi ye-cartridge uma kuqhathaniswa ne-CD eyanda kakhulu. Ngisho nanamuhla imidlalo yayo inikeza amahora amaningi okuzijabulisa, ngakho-ke uma ungenayo ikhonsoli yomzimba, sizokwethula ama-emulators amahle kakhulu we-Nintendo 64 okwekhompyutha.
1 Yini i-emulator?
2 Project 64
3 phinda 64 plus
I-emulator wuhlelo olusivumela ngokuyisisekelo sebenzisa imidlalo ye-Nintendo 64 kukhompyutha yethu, sisebenzisa izakhi ze-PC yethu. Lokhu kungenzeka, ngokwengxenye, ngenxa yokwakheka kwe-64-bit le khonsoli esivele yayisebenzisa.
Ngale ndlela, sizokwazi ukujabulela izihloko ezinhle kakhulu ezibekwe umkhiqizi waseJapan emakethe nakumakhompyutha asebemnkantshubomvu, njengoba izidingo zokuwenza usebenze zithengeka kakhulu.
Okokuqala ohlwini iProject 64, edume kakhulu njenge i-emulator enkulu kunazo zonke etholakalayo yeNintendo 64. Phakathi kwezici zayo eziningi singagqamisa yayo ukusebenza kahle kuwo womabili amawindi kanye ne-android.
Abakhetha ukuyizama bayokuthola lokho ngeke badinge ukuchitha isikhathi esiningi ekucushweni ukuze siyenze isebenze, njengoba kunqubo yokufaka ngokwayo sizoba nakho konke okukulungele ukuyiqhuba.
Sizokwazi ukufinyelela abadlali abaningi, inketho yokufaka ama-cheats futhi ushintshe ngisho nokulungiswa noma usayizi weskrini ukuze usilungise emithonjeni ehlukene yokuphuma kwevidiyo.
Enye yezinzuzo zayo ezinkulu wumthombo ovulekile, okwenze waba nawo umphakathi omkhulu ngemuva ukukusekela.
phinda 64 plus
Akulula kangako ukuyisebenzisa njengeProject 64, kodwa ngokubuyisela sizothola a umuzwa omuhle kakhulu womsindo emidlalweni elingisiwe.
Esimeni sokuhlangabezana nanoma iyiphi inkinga ngokuqhuba igeyimu ku-Project 64, kunconywa kakhulu ukunikeza u-Mupen ivoti lokuzethemba.
Ukusetshenziswa kwayo ayinaso isixhumi esibonakalayo, kodwa ikhetha ukuthi umugqa womyalo ojwayelekile usebenze.
Sinayo iyatholakala ku-Windows, Mac, Linux kanye ne-Android okuyiphuzu elikhulu elivuna yona.
Sifika kwenye indlela ehlukile nokuthi i-RetroArch ayisona isilingisi esingasisebenzisa, sethula isoftware ye-cross-platform.
Sizokwazi ukufinyelela izinketho eziningi zazo zombili ikhonsoli, ikhompuyutha noma iselula futhi sizisebenzise ekhompyutheni yethu.
Endabeni yeNintendo 64 isebenzisa isixhumi esibonakalayo esinesithombe esisekelwe ku-Mupen 64 kodwa ukwengeza izinketho ezengeziwe ezifana ne-overclocking kanye nezinketho eziningi zokwenza ngokwezifiso.
Kuyindlela iphelele uma usebenzisa ama-emulators e-multi-platform ezahlukene, njengoba kuzokwenza lula ukufinyelela kuzo, ukuqoqa yonke into ohlelweni olufanayo.
Ukucushwa kwayo kokuqala akulula, kodwa sinamavidiyo amaningi achazayo ku-YouTube azosibamba ngesandla kulo msebenzi.
Enye yezinketho ezingavamile kakhulu yi-SupraHLE. Lesi silingisi asinconyelwe kunoma yimuphi umsebenzisi futhi sizochaza ukuthi kungani.
Ngaphandle kokukwazi ukubala kuzo zonke izici zamanye ama-emulators, kulokhu singashintsha cishe yonke imingcele yemidlalo.
Iphuzu eliwuphawu ngempela ukuthi ukukwazi ukulungisa umsindo ngendlela esiyithandayo.
Njengephuzu elibi sithola ukusebenza kwayo futhi kunjalo ilungiselelwe ukusebenza ku-Windows 7, ngakho-ke Windows 10 abasebenzisi bangabona umuzwa womsebenzisi uncipha.
Le emulator inikeza ukusekela kokubili amawindi kanye Android, ngakho-ke iyindlela enhle yalabo basebenzisi abanamasistimu wokusebenza womabili ekhaya.
Ngaphakathi kwamandla ayo singathola izinketho ezizosivumela ukuthi senze imidlalo ngendlela esiyithandayo. Kusukela esigabeni samaqhinga ukuya ngisho nokudala owakho umdlalo wevidiyo.
Kuzo zonke lezi ezingenhla kumele kwengezwe i ukusetshenziswa kalula nokuhambisana ngokugcwele nawo wonke ama-joystick namaphedi omdlalo.
Njengephuzu elibi singathola ukuphahlazeka okuthile phakathi nemidlalo kanye izimo ezihamba kancane okungenzeka ngenxa yokuntuleka kokwenza kahle.
Enye yama-emulators akamuva ohlwini kanye nenye yezindlela ezintsha.
Yethulwa njengesifanisi, ngoba inhloso akukona nje ukulingisa, kodwa futhi belingisa ngokuphelele imvelo ye-console ngokwayo.
Lokhu kuhlobene nezikhathi zokulayisha, izingodo, iwashi langaphakathi ... ngisho nokugwema ukusetshenziswa kwama-hacks kanye nokungabikho kwezimbungulu.
Ngokusho kwezincwadi zabo, inhloso ukuheha ochwepheshe abakhulu ekulingiseni kanye thola ukuthuthukisa i-emulator yokugcina.
Elinye lamaphuzu alo aqinile ukuthi kungenzeka uyigijime neqembu elinesizotha, njengoba i-i5 4670k inganele.
Ngakolunye uhlangothi, ukuba ngenye yezintsha, inesiteji esincane ngemuva nakuba inamandla aphezulu kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Iforamu Yeselula » Imidlalo » Ama-emulators we-Nintendo 64 angcono kakhulu we-PC